Jehova Emeerela M Ihe Ọma Na-erughịrị M | Akụkọ Ndụ
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Batak (Toba) Bicol Bulgarian Cakchiquel (Western) Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Chiyao Chol Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Lamba Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Mam Mambwe-Lungu Maya Mazatec (Huautla) Mixe Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Quechua (Bolivia) Romanian Runyankore Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Akụkọ Félix Alarcón Kọrọ
Mgbe m dị obere, m na-enwe mmasị ime ihe ndị na-eto eto ibe m na-eme, na-echekwa otú m ga-esi bụrụ onye a ma ama. Ọ na-atọ m ụtọ iso ndị enyi m na-anọ. M na-enwekwa mmasị igwu mmiri na ịgba bọl. Ma, o nwere otu ihe dị egwu mere mgbe m dị afọ iri na asaa. Otu ụbọchị, ná mgbede, eji m ọgba tum tum nwee ihe mberede okporo ụzọ nke mere ka ahụ́ m kpọnwụọ, si n’olu ruo n’ụkwụ m. O meela ihe dị ka afọ iri atọ ugbu a. O teekwala m na-anaghịzi enwe ike isi n’àkwà m bilie.
Etoro m n’Alikanti, bụ́ obodo dị n’akụkụ oké osimiri dị n’ebe ọwụwa anyanwụ Spen. N’ezinụlọ anyị, o nweghị onye na-achọ ịma gbasara ibe ya. Ọ bụ ya mere na mgbe m dị obere, ụkwụ na-anọkarị m n’ámá. E nwere ebe a na-arụzi taya n’akụkụ ụlọ anyị. Mụ na otu n’ime ndị na-arụ ọrụ ebe ahụ bịara bụrụ enyi. Aha ya bụ José María. Ọ naghị eme ka ndị ezinụlọ anyị. Ihe gbasara m na-emetụ ya n’obi. M nwee nsogbu, ọ na-enyere m aka ka ọ̀ bụ otu nne ji mụ na ya. Mụ na ya bụ ezigbo enyi n’agbanyeghị na o ji afọ iri abụọ tọọ m.
N’oge ahụ, José María na Ndịàmà Jehova ebidola ịna-amụ Baịbụl. M hụrụ na o jighị Akwụkwọ Nsọ egwu egwu. Ọ na-akọkwara m ihe ndị ọ na-amụta na Baịbụl. Ya na-akọ, mụ ana-ege ya ntị. Ma, o nweghị mgbe ọ bụla m chebaara ihe ọ na-akọrọ m echiche. Uche m niile dị n’ihe ndị ọzọ n’oge ahụ. Ma, o nwere ihe mere ka uche m mechazie dịrị na ya.
IHE MBEREDE OKPORO ỤZỌ NKE GBANWERE NDỤ M
Anaghị m achọ ịkọ ihe kpatara ihe mberede okporo ụzọ a. Naanị ihe m nwere ike ikwu bụ na ọ bụ nzuzu m na aghara m kpataara m nsogbu a. Ndụ m gbanwere kpamkpam n’otu ụbọchị. Ahụ́ dị m nnọọ gara gara n’ụbọchị ahụ, ma n’otu ntabi anya, ahụ́ m akpọnwụọ, mụ ahụzie onwe m n’ụlọ ọgwụ. Onye gwa m na ọ bụ m ga-anọ n’ute ọrịa a m nọ kemgbe, agaghị m ekweta. M nọ na-ajụ onwe m, sị, ‘M̀ ka nọ ndụ eme gịnị?’
José María bịara leta m n’ụlọ ọgwụ. Ozugbo ahụ kwa, ọ gwara Ndịàmà Jehova nọ n’ọgbakọ dị n’ebe ahụ ka ha na-abịa eleta m. Otú ha si na-abịa eleta m ruru m n’obi. Ozugbo m si na ngalaba ebe a na-elekọta ndị ọrịa ha dị oké njọ pụta, mụ na Ndịàmà Jehova bidoro ịmụ Baịbụl. M ghọtara ihe mere ndị mmadụ ji ata ahụhụ, na-anwụkwa anwụ, na ihe mere Chineke ji kwe ka ihe ọjọọ na-eme. Amụtakwara m na Chineke kwere nkwa ime ka ụmụ mmadụ zuo okè n’ụwa niile, e nweghịzi onye ga-asị: “Ana m arịa ọrịa.” (Aịzaya 33:24) Ọ bụ ugbu a m bidoro mụwa Baịbụl ka m matara na ihe ga-adịrị m mma n’ọdịnihu.
Mgbe m si n’ụlọ ọgwụ lọta, amụsiwere m Baịbụl ike. M na-eji ígwè ndị ngwọrọ a rụrụ otú pụrụ iche agadị ọmụmụ ihe Ndịàmà Jehova mgbe ụfọdụ, sorokwa ha gaa ozi ọma. N’abalị ise n’ọnwa Nọvemba afọ 1988, mgbe m dị afọ iri abụọ, e mere m baptizim n’ime otu nnukwu ihe a na-anọ n’ime ya asa ahụ́. Jehova Chineke emeela ka m mata na ndụ m dị bara uru. Ma, olee ihe m ga-eme iji gosi Jehova na obi dị m ụtọ n’ihe ọma a o meere m?
M NA-EJERE JEHOVA OZI N’AGBANYEGHỊ NA M NWERE NKWARỤ
Ekpebisiri m ike na m gaghị ekwe ka nkwarụ mụ a mee ka m ghara ime ihe m ga-emeli n’ozi Jehova. M chọrọ ịna-aga n’ihu n’ozi Jehova. (1 Timoti 4:15) Ọ dịghịrị m mfe ná mmalite, n’ihi na obi adịghị ndị ezinụlọ anyị mma na m bụzi Onyeàmà Jehova. Ma, ụmụnna m ndị mụ na ha na-efekọ Jehova kwụ m n’azụ. Ha ekweghị ka ọmụmụ ihe ọ bụla kwaa m, ha na-akpọkwa m aga ozi ọma.
Nwayọọ nwayọọ, nsogbu m bịara ka njọ, ya adịzie mkpa ka m nwee onye ga na-elekọta m mgbe ọ bụla. O tere aka tupu a chọta ebe dị mụ mma a na-elekọta ndị nwere nkwarụ n’obodo Valenshia. Ọ dị otu narị kilomita na iri isii ma e si ebe ugwu Alikanti gawa ya. Ebe ahụ ka m bizi ruo taa.
Ọ bụ eziokwu na ọrịa m anaghị ekwe m si n’àkwà m bilie, ekpebisiri m ike ịna-ezi ndị mmadụ ozi ọma
Ọ bụ eziokwu na ọrịa m anaghị ekwe m si n’àkwà m bilie, m kpebisiri ike ịna-efe Jehova na-akwụsịghị akwụsị. Eji m ego mmachi akpa gọọmenti na-enye ndị nwere nkwarụ nakwa ego ndị ọzọ gọọmenti na ndị mmadụ na-enye m zụta kọmputa na ekwentị. E doweere m kọmputa ahụ n’akụkụ àkwà m. Ọ na-abụ chi foo, onye na-elekọta m agbanyere m ya na ekwentị m. E nwere ihe a kwụnyeere m na kọmputa m nke na-eme ka m nwee ike iji agba m na-apị ya. Enwekwara m mkpịsị pụrụ iche m na-eji ọnụ m ejide. M na-eji ya ede ihe m chọrọ ide na kọmputa m na n’ekwentị m, na-ejikwa ya apị nọmba ekwentị ọ bụla m chọrọ ịkpọ.
M na-eji mkpịsị a apị nọmba ekwentị m chọrọ ịkpọ
Olee uru kọmputa na ekwentị mụ a baarala m? Nke mbụ bụ na, m na-eji ha aga n’adres Ịntanet bụ́ jw.org nakwa n’Ọ́bá Akwụkwọ Anyị NKE DỊ N’ỊNTANET. Ihe ndị dị na ha abaarala m ezigbo uru. Ọtụtụ mgbe, m na-amụ akwụkwọ ndị e ji amụ Baịbụl ruo ọtụtụ awa. O meela ka m na-amụtakwu gbasara Chineke na àgwà ya. Mgbe ọ bụla ọ dị ka owu ọ̀ na-ama m ma ọ bụ na obi ọ̀ chọwala ịjọ m njọ, m na-achọta ihe na-eme ka obi dị mụ mma na jw.org.
Oge ọmụmụ ihe ọgbakọ anyị ruo, m na-eji kọmputa m ege ihe a na-ekwu, aza ajụjụ, edu n’ekpere, akụzi ihe, ma na-agụkwara ọgbakọ Ụlọ Nche ụbọchị e kenyere m ịgụ. N’agbanyeghị na anaghị m agali n’ebe a na-anọ enwe ọmụmụ ihe, m na-eso ọgbakọ eme ihe ndị a na-eme.
Ọ bụ eziokwu na enweghị m ike ịga ozi ọma site n’ụlọ ruo n’ụlọ otú ọtụtụ Ndịàmà Jehova na-eme, m na-eji ekwentị m na kọmputa m ezi ndị ọzọ ozi ọma. Otú m si eji ekwentị ezi ndị mmadụ ozi ọma medịrị ka ndị okenye ọgbakọ anyị gwa m ka m na-ahazi ozi ọma e ji fon ezi n’ọgbakọ anyị. Ụdị ozi ọma a na-eme ka ndị ọgbakọ anyị na-enweghị ike isi n’ụlọ ha pụta nwee ike ịna-ezi ndị mmadụ ozi ọma.
Ebe m na-akụziri mmadụ Baịbụl
Ma, ọ bụghị naanị ekwentị na kọmputa ka mụ na ha na-anọ mgbe niile. O nweghị ụbọchị ndị enyi m na-anaghị abịa eleta m. Ha na-akpọ ndị ikwu ha na ndị nwere mmasị ịmụ Baịbụl abịa. Ha na-agwakarị m ka m kụziere ndị ahụ ha kpọ bịa Baịbụl. O nwekwara mgbe ezinụlọ ụfọdụ na-abịa ka mụ na ha soro nwee ofufe ezinụlọ. Obi na-akacha atọ m ụtọ ma ụmụaka ha bịa nọdụ n’akụkụ àkwà m na-akọrọ m ihe mere ha ji hụ Jehova n’anya.
Ebe m so ndị enyi m na-enwe ofufe ezinụlọ
Ọtụtụ oge, ụlọ m na-eju na mmadụ. Ndị enyi m na-esi ebe dị iche iche abịa eleta m. Nleta a ha na-eleta m na-atọ m ụtọ. Otú a ndị mmadụ si ekworo abịa eleta m na-eju ndị ụlọ ọgwụ na-elekọta m anya. M na-ekele Jehova kwa ụbọchị na o mere ka m nwee ụdị ụmụnna a na-enweghị atụ.
M KA NỌ NA-ADỌLỊ
Mmadụ kelee m, jụọ m otú m mere, m na-agwa onye ahụ, sị: “M ka nọ ya, na-adọlị.” Ma, ama m na ọ bụghị naanị m na-adọlị. N’agbanyeghị ihe bụ́ nsogbu na-abịara Ndị Kraịst, anyị niile na-alụ “ezi ọgụ nke okwukwe.” (1 Timoti 6:12) Olee ihe nyeere m aka ịna-edi nsogbu a bịaara m kemgbe ọtụtụ afọ? M na-ekpe ekpere kwa ụbọchị, na-ekele Jehova na o mere ka m mata na ndụ m dị bara uru. M na-agbakwa mbọ otú ike kwere m n’ozi m na-ejere Jehova, na-echetakwa na ahụ́ ga-adị mụ mma n’ọdịnihu.
M na-echekarị otú ndụ ga-adị n’ụwa ọhụrụ, mgbe m ga-enwe ike ịgba ọsọ ma na-awụli elu. Enyi m nwoke ahụ bụ́ José María nwekwara nkwarụ n’ihi ọrịa polio. Mgbe ụfọdụ, m chọọ igwusa ya egwu, mụ asị ya: “Mụ na gị gbawa ọsọ n’ụwa ọhụrụ, ònye ga-agbaka ibe ya?” Ya asị m na “ihe dị mkpa abụghị onye ga-agbaka ibe ya, kama, ọ bụ ka anyị banyegodị na Paradaịs.”
Ọ ka na-esiri m ike ikweta na enweghịzi m ike ibili ebili. Ama m na mgbe m ka na-eto eto, m zuzuru nzuzu tinyere m ná nsogbu a m nọ na ya ugbu a. Ma, m na-ekele Jehova na ọ hapụghị m. O meerela m ọtụtụ ihe ọma. O meela ka m nwee ụmụnna mụ na ha so efe ya, ndụ ana-atọ m ụtọ, mụ ana-enwe ọṅụ na m na-akụziri ndị ọzọ ihe, nweekwa olileanya na ahụ́ ga-emecha dị mụ mma. A sị m kwuo otú obi dị m naanị n’otu ahịrịokwu, m ga-asị na Jehova emeerela m ihe ọma na-erughịrị m.
Gịnị Ga-eme Okpukpe Ndị E Nwere n’Ụwa A?
È nwere mgbe mmadụ niile ga na-efe Chineke?
Olee Uru Alaeze Chineke Ga-abara Gị?
Ọ bụ gị ga-ekpebi ma ọ̀ ga-abara gị uru ma ọ bụ na ọ gaghị abara gị.